YEYINTNGE(CANADA): Sunday, November 15
ဗမာတွေရဲ့ ကိုယ်တွင်း မကောင်းဆိုးဝါးများ ဆိုပြီးကိုဇာနည်ကဧရာတီမှာဂျာအေးသူ့အမေရိုက်တဲ့ကဗျာလွတ်အကထကနေလို့ ဒီဆောင်ပါးကိုရေးမိတာပါ။ မြန်မာ့သမိုင်းဟာအုပ်ချုပ်သူအဆက်ဆက်လက်ထက်များမှာလူမျိုးစုအချင်းချင်းတိုက်ခိုက်လာကြတာအ
ရဲရင့်ငယ် (နိုဝင်ဘာ၁၅ ၂၀၀၉)
BY ရဲရင့်ငယ်(ကနေဒါ) ... 11/15/2009 1 အကြံပြုခြင်း
BY ရဲရင့်ငယ်(ကနေဒါ) ... 11/15/20090အကြံပြုခြင်း
ခေါင်းစဉ် ဓာတ်ပုံ, ဓါတ်ပုံ
Su 2Nd Statement
"စစ်အုပ်စု သက်တမ်းရှည်နေသရွေ့" စာအုပ်ဟာ ကိုကိုးကျွန်း အကျဉ်းထောင် ဖျက်သိမ်းရေးအတွက် အစာငတ်ခံ တိုက်ပွဲ ဆင်နွှဲတဲ့အကြောင်းကို ကိုယ်တိုင် ပါဝင်ခဲ့တဲ့ 'တိုက်ပွဲဝင် ရဲဘော်တဦး' က ရေးသားထားတဲ့ ကိုယ်တွေ့မှတ်တမ်း ဖြစ်ပါတယ်။ ၁၉၆၂ ခုနှစ်၊ တော်လှန်ရေး ကောင်စီ တက်လာပြီးတဲ့နောက် နိုင်ငံရေး လှုပ်ရှားသူတွေကို အစုလိုက် အပြုံလိုက် ဖမ်းဆီးပြီး ၁၉၆၉ ခုနှစ်မှာ မြန်မာပြည်မကြီးနဲ့ဝေးရာ ကိုကိုးကျွန်းကို ပို့ခဲ့ပါတယ်။ တော်လှန်ရေး ကောင်စီရဲ့ ကိုယ်ထူကိုယ်ထ တကျွန်းးထောင် စီမံကိန်းကို တိုက်ဖျက်နိုင်ရေးအတွက် မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ ထောင်သမိုင်းမှာ မဖြစ်ခဲ့ဘူးတဲ့ အသေအပျောက် အများဆုံး အစာငတ်ခံ တိုက်ပွဲ အကြောင်းကို ပြန်လည် မှတ်တမ်း တင်ထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံ အတွင်း ရေးသား ထုတ်ဝေခွင့် မရရှိနိုင်တဲ့ သမိုင်းဖြစ်ရပ်မှန် တကွက်လည်း ဖြစ်ပါတယ်။ ၂ဝဝ၄ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလက ထိုင်းနိုင်ငံမှာ ရေစီးသံဂျာနယ် ကနေ ထုတ်ဝေ ဖြန့်ချိခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။
Long Term Military
15 Nov ဒိုင်ယာရီ
From left to right, Myanmar's Prime Minister Gen. Thein Sein, Singaporean Prime Minister Lee Hsien Loong and U.S. President Barack Obama, prepare to take their seats foramultilateral meeting with ASEAN-10 members in Singapore, Sunday, Nov. 15, 2009.(AP )
nov 15 09 Diary
Ahlin Yanant No 4
ထိုက်သူနိုင် နိုဝင်ဘာ ၁၃ ၊၂၀၀၉။
မြန်မာနိုင်ငံတဝန်း ခရီးသွားလာရင်းကျမက လူတွေကို ဘာလို့ ဒီမိုကရေစီကို လိုချင်တာလဲလို့ မေးကြည့်မိပါတယ်။ မကြာခဏဆိုသလို အကြားရဆုံးအဖြေကတော့ ကျနော်တို့ကျမတို့ လွတ်မြောက်ချင်လို့ဆိုတာပါပဲ။ သူတို့အကျယ်ချဲ့ပြီး မပြောရဘဲ သူတို့ဘာပြောတယ်ဆိုတာ ကျမနားလည်ပါတယ်။ သူတို့ ရဲ့ ကံကြမ္မာကို သူတို့ကိုယ်တိုင်ပုံဖော်ဆုံးဖြတ်ခွင့် မရှိဘဲ ဖိနှိပ်ခံနေရတာက လွတ်မြောက်လိုချင်ကြပါတယ်။ လက်နက်အင်အားအခြေခံတဲ့ အမိန့်တွေနဲ့ ထင်ရာစိုင်းမှုတွေ အောက်မှာ ရောက်နေရတဲ့ သူတို့ရဲ့နိစ္စဓူဝ ကြုံတွေ့နေရတဲ့ အဖြစ်တွေကိုမလိုချင်ကြတော့ပါဘူး။ လူငယ်တွေကို ကျမက လွတ်လပ်ခြင်းဆိုတာဘာလဲလို့ မေးကြည့်တဲ့အခါ သူတို့ ကသူတို့စိတ်ထဲရှိတာတွေကို ရှိတဲ့အတိုင်း ရင်ဖွင့်ပြောပြချင် တာလို့ ဆိုပါတယ်။ သူတို့အသိဉာဏ်ပညာရဲ့ စိန်ခေါ်မှုကိုဖြည့်ဆည်းမပေးနိုင်တဲ့ ပညာရေးစနစ်အပေါ် မကျေနပ်ချက် တွေကို သူတို့ ထုတ်ဖော်ပြောလိုကြပါတယ်။ ဝေဖန်၊ဆွေးနွေး၊ ငြင်းခုံနိုင်သူတွေ ဖြစ်ပြီး စုရုံး၊ သီဆို၊ အော်ဟစ်၊ သြဘာပေးနိုင်ဖို့ ထောင်သောင်းသိန်းမကစုဝေးနိုင်သူတွေဖြစ်လိုကြပါတယ်။
မြန်မာနိုင်ငံက လူငယ်တွေဟာ ကျယ်ပြန့်လွန်းတဲ့ မျှော်လင့်ချက်တွေနဲ့ အံမခန်းမှုတွေပြည်နေတဲ့ လူငယ်ဘဝရဲ့ နိုးကြား တက်ကြွတဲ့ အရွယ်တွေကို အပြည့်အဝပိုင်ဆိုင်ချင်တယ်။ မရေရာမှုတွေ၊ ကြီးကျယ်မှုတွေနဲ့ စိတ်ကူးယဉ်မှုတွေ၊ တောက် ပခမ်းနားမှုနဲ့ ဖီလာဆန့်ကျင်မှုတွေ ကြမ်းတမ်းခက်ထန်မှုနဲ့သိမ်မွေ့မှုတွေ တန်းစီပြည့်နေတဲ့ လူငယ်ဘာဝကို အပြည့်အဝ ရယူလိုကြပါတယ်။
မြန်မာအမျိုးသမီးတွေအနေနဲ့ရော ဘာတွေလိုအပ်ပါသလဲ။ ကုန်ဈေးနှုန်းကြီးမြင့်မှုရဲ့ ဖိစီးမှုဒဏ်ကြောင့် အားပျက်ငြီးငွေ့ လောက်အောင် အိမ်မှုထိန်းသိမ်းနေရတဲ့ ဘဝက လွတ်မြောက်ချင်ကြပါတယ်။ လွတ်လပ်စွာ တွေးတောကြံဆမိလို့ ခင်ပွန်းဖြစ်သူ အပြစ်ပေးအရေးယူခံရမလား ဒါမှမဟုတ် ကလေးတွေများဘဝရဲ့ အခွင့်အလမ်းတွေ ဆုံးပါးသွားမလား ဆိုတဲ့ စိုးရိမ်ကြောင့်ကြမှုတွေက ကင်းလွတ်ချင်ကြပါတယ်။ မိသားစုကို ထောက်ပံ့နိုင်အောင် ခန္ဓာကိုယ်ကို ရင်းနေရတဲ့ ဘဝက လွတ်မြောက်ဖို့ တောင့်တနေကြတဲ့အမျိုးသမီးတွေလည်း တော်တော်များများ အများကြီးကိုရှိပါတယ်။
ကျမ တွေ့ဆုံခဲ့တဲ့ လယ်သမားယာသမားတွေဆိုရင် သူတို့ ဆန္ဒအတိုင်း စိုက်ပျိုးထွန်ယက်ချင်ကြတယ်။ မတော်မတရား ဈေးနှိမ်ခံရပြီး အစိုးရကို မရောင်းမနေရ ခြိမ်းခြောက်ခံရတာမျိုးတွေက ကင်းလွတ်ပြီး သူတို့ထွက်ကုန်တွေကို ကိုယ့်ဆန္ဒ နဲ့ကိုယ် ဈေးကွက်တင်ရောင်းချလိုကြပါတယ်။
သူတို့ဟာ နိစ္စဓူဝ မြေနဲ့ဖက်ပြီး ဘဝကို ရုန်းကန်ရပ်တည်သူတွေပါ။ ဒီလိုကြမ်းတမ်းတဲ့ ဘဝတွေအပေါ်မှာ ကျိုးကြောင်း မဆီလျော်တဲ့ အမိန့်တွေနဲ့ နာလည်ရခက်တဲ့ အာဏာပိုင်တွေကြောင့် နောက်ထပ် ဝန်ထုပ်ဝန်ပိုးမဖြစ်ချင် ကြတော့ပါဘူး။
ဒါနဲ့ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် အဖွဲ့ ဝင်တွေ ကျမတို့ ရောလို့ မေးစရာရှိပါတယ်။ ဘာလို့ကျမတို့တတွေ တိုင်းပြည် လွတ်မြောက်ဖို့ခက်ခက်ခဲခဲ လုပ်ကိုင်နေပါသလဲ။ ဒီလိုလုပ်ကိုင်နေတာဟာ ဒီမိုကရေစီအပေါ် မရေမရာနဲ့ အကောင်းမြင် မျှော်လင့်ပြီး ထင်ရာလုပ်ကိုင်နေတာ မဟုတ်ပါဘူး။ ဒီမိုကရေစီဆိုတာ သူရဲ့တောက်ပမှုကို ကြာရှည်ထိန်းနိုင်အောင် အမြဲတစေအရောင်တင်ပေးရတဲ့ ရတနာတပါးဖြစ်တယ်ဆိုတာ ကျမတို့သိပါတယ်။ ပျက်စီးဆုံးရှုံးတာ၊ အခိုးခံရတာတွေ မဖြစ်အောင် ကာကွယ်ဖို့ ဒီမိုကရေစီကို မျက်ခြည်မပြတ် စောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုနေရပါလိမ့်မယ်။ လွတ်လပ်တဲ့ မြန်မာပြည် ကသာ လူ့ဂုဏ်သိက္ခာကို တန်ဖိုးထားလေးစားတဲ့နိုင်ငံတည်ထောင်နိုင်မှာမို့ လွတ်မြောက်ရေးအတွက်က ကျမတို့တတွေ ပင်ပင်ပန်းပန်းကြိုးစားနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။
တိုင်းပြည်တဝန်းလှည့်လည်သွားတဲ့အခါ လူတွေက ကျမ နေအိမ်အကျယ်ချုပ်နဲ့ နေရတဲ့အချိန်တွေမှာ ဘယ်လိုခံစားရ သလဲလို့ မေးကြပါတယ်။ ပထမအကြိမ် ခြောက်နှစ်နဲ့ ဒုတိယအကြိမ် ဆယ်ကိုးလ ကျမနေခဲ့ရပါတယ်။ မိသားစုမိတ်ဆွေ အပေါင်းအသင်းတွေနဲ့ ခွဲခွာပြီး ကျမဘယ်လိုနေခဲ့သလဲပေါ့။ မေးမှမေးကြ ပလေတယ်။ ဒီအာဏာရှင်နိုင်ငံမှာ ယုံကြည် ချက်အတွက် အကျဉ်းချခံရသူကသာ အမှန်တကယ် လွတ်လပ်သူဖြစ်တယ်လို့ ကျမကပြန်ဖြေပါတယ်။ မှန်ပါတယ်။ ကျမတို့ဟာ ကျမတို့ ရဲ့ သာမန်ဘဝလွတ်လပ်ခွင့်တွေကို ပေးဆပ်ထားရတယ်။ ဒါပေမဲ့ လူသားဘဝရဲ့ တန်ဖိုးအရှိဆုံးဖြစ် တဲ့ ယုံကြည်ချက်အမှန်တရားအပေါ် ကျမတို့ ကြံ့ကြံ့ခံရပ်နေခဲ့ကြပါတယ်။ ဒီမှာပြည်သူလူထုအတွက် ကျမအလိုချင်ဆုံး ကတော့ စစ်မှန်တဲ့ လွတ်လပ်ခွင့်ကို အာမခံကာကွယ်ပေးနိုင်ဖို့ နဲ့ အမှန်တကယ် လုံလုံခြုံခြုံကာကွယ် ပေးနိုင်ဖို့အတွက် လွတ်လပ်ခွင့် ပါပဲ။
ကြောက်ရွံ့မှုရဲ့ နုံးချည့်သေးသိမ်စေတဲ့ အနှောင်အဖွဲ့တွေကို ဖယ်ရှားပြီး မြန်မာပြည်သူတွေဟာ လွတ်လပ်တဲ့လူသားတွေ အဖြစ် ခေါင်းမော့ဂုဏ်ယူနိုင်သူတွေ ဖြစ်လာမှာကို ကျမတွေ့မြင်လိုပါတယ်။ ကျမတို့အားလုံးအတွက် ပိုပြီးပျော်ဖို့ကောင်း တဲ့လုံခြုံမှုလည်း ပိုရှိတဲ့လူ့ ဘောင်ဘဝကို တည်ဆောက်ဖို့ စည်းစည်းလုံးလုံး ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်ကြိုးပမ်းကြတာကို ကျမ တွေ့မြင်လိုပါတယ်။ အထူးသဖြင့် လူငယ်တွေဟာ ကိုယ့်ကိုယ်ကို ယုံကြည်မှုအပြည့်နဲ့ အနာဂတ်ကိုတက်လှမ်းပြိးကြုံလာ ရမဲ့ စိန်ခေါ်မှုအားလုံးကိုရင်ဆိုင်ဖို့ သူတို့ရဲ့တန်ဖိုးရှိတဲ့စိတ်ဓာတ်တွေ မြင့်မားနေတာကို ကျမတွေ့မြင်လိုပါတယ်။ ဒီတိုင်း ပြည်ဟာ ဒီမြေကိုချစ်သူ၊ ဒီမြေမှာနေ၊ ဒီမြေမှာသေခဲ့သူအားလုံးအတွက် ထိုက်တန်တဲ့ တိုင်းပြည်အဖြစ် ဘိုးဘွားအမွေ အနှစ်အတွက် ဂုဏ်ယူရပြီလို့ လည်း ကျမပြောပြချင်ပါတယ်။ ဒါတွေဟာစိတ်ကူးယဉ်အိပ်မက်တွေ မဟုတ်ပါဘူး။
ဒါတွေအားလုံး ပြည်သူလူထုရဲ့ဆန္ဒသာ နောက်ဆုံးမှာ အောင်ပွဲမုချရရမယ် ဆိုတဲ့ခိုင်မာတဲ့ ယုံကြည်မှုနဲ့ ကျမတို့အားလုံး နှစ်နဲ့ချီကြိုးပမ်းလုပ်ဆောင်နေတာတွေရဲ့ ပကတိ ဦးတည်ရာပဲဖြစ်ပါတယ်။
(ဝါရှင်တန်ပို့စ် သတင်းစာနှင့်တွဲထွက်သည့် မတ်လ (၉)ရက်နေ့ထုတ် Parade သတင်းစုံမဂ္ဂဇင်းတွင်မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီ ခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရေးသားသည့် All We want is Our Freedom “ လွတ်လပ်မှုကိုပဲ ကျမတို့ လိုချင်တယ် ” ဆောင်းပါးကို ထိုက်သူနိုင် ဘာသာပြန်ဆိုတင်ပြထားသည်။ )
သီရိလင်္ကာတွင် အာဏာသိမ်းမည့် သတင်းများကြောင့် လုံခြုံရေးတိုးမြှင့်
၁၄ နိုဝင်ဘာ ကိုလံဘို ၊ ၊အေပီ သတင်းဌာန
အာဏာသိမ်းမည့် သီရီလင်္ကာစစ်ဗိုလ်ချုပ်ကြီး ဖုန်စက္ကနှုတ်ထွက်စာတင်ထားသည့် လက်ရှိ သီရီလင်္ကာ စစ်တပ်၏ ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဖြစ်သူ ဆာရတ်ဖုန်စက္က က ဦးဆောင်၍ အာဏာသိမ်းမှု ပြုလုပ်မည် ဆိုသည့် သတင်းများကြောင့် သိရီလင်္ကာ နိုင်ငံကိုလံဘို မြို့ နှင့် မြို့ တော် ဂျယာဝါဒင် တို့ တွင် လုံခြုံရေးများ တိုးမြှင့်ထားသည်။
မြောက်ပိုင်း ဂျဖနာ ကျွန်းဆွယ်ရှိ တမီလ် ကျားသူပုန် တို့ အား ပြီးခဲ့သည့် မေလက အမြစ်ဖြုတ်တိုက်ခိုက်နိုင်ခဲ့သည့် သီရိလင်္ကာ ကာကွယ်ရေး ဦးစီးချုပ်ဖြစ်သူက ဦးဆောင်၍ အာဏာသိမ်းမည့် သတင်းများကြောင့် သမ္မတ ဖြစ်သူ မဟင်ဒါရာဂျာ ပါစက လည်းလုံခြုံရေးတိုးမြှင့်ထားသည်။
ဗိုလ်ချုပ်ကြီး ဖုန်စက္ကသည် ၂၆ နှစ်ကြာ ပြည်တွင်းစစ်ကို အဆုံးသတ်နိုင်ခဲ့ခြင်းကြောင့် ပြည်တွင်းတွင် လူကြိုက်များပြီး
ရွေးကောက်ပွဲတွင် သမ္မတ အဖြစ် ရေပန်းစားနေ သူ ဖြစ်သည်။ဂျဖနာ ထိုးစစ်တွင် သိရိလင်္ကာ စစ်တပ် အောင်ပွဲရပြီးနောက်ပိုင်းတွင် စစ်တပ်ထိပ်တန်းခေါင်းဆောင်များနှင့်အစိုးရ အဖွဲ့ ကြား သဘောထားများကွဲပြားလာခဲ့သည်။
သီရီလင်္ကာ နိုင်ငံ သို့အလည်အပတ်ရောက်ရှိနေသည့် မြန်မာ စစ်ခေါင်းဆောင် ဖြစ်သူ ဗိုလ်ချုပ်မှုးကြီး သန်းရွှေမှာ ခရီးစဉ် အတွင်း သီရီလင်္ကာ စစ်တပ် အရာရှိ များ နှင့် တွေ့ ဆုံ၍ အင်အားကြီးမားလှသော ကျားသူပုန် တို့ အားအနိုင်ယူခြင်းကို လေ့လာမည် ဟု သိရသော် လည်းထိပ်တန်းစစ်ခေါင်းဆောင် များနှင့် တွေ့ ဆုံနိုင်ခြင်းမရှိကြောင်း ဂါးဒီးယန်း သတင်းစာတွင် ဖေါ်ပြထားသည်။
သီရီလင်္ကာ ၏ ထိပ်တန်းစစ်အရာရှိ တစ်ချိူ့ သည် အမေရိကန် စစ်တက္ကသိုလ် များတွင် သွားရောက်ပညာသင်ကြားခဲ့ဖူးသည်။
Scenes from the motion picture "2012." Courtesy Columbia Pictures. Remember the Y2K scare? It came and went without much ofawhimper because of adequate planning and analysis of the situation. Impressive movie special effects aside, Dec. 21, 2012, won't be the end of the world as we know. It will, however, be another winter solstice. Much like Y2K, 2012 has been analyzed and the science of the end of the Earth thoroughly studied. Contrary to some of the common beliefs out there, the science behind the end of the world quickly unravels when pinned down to the 2012 timeline. Below, NASA Scientists answer several questions that we're frequently asked regarding 2012.
Question (Q): Are there any threats to the Earth in 2012? Many Internet websites say the world will end in December 2012.Answer (A): Nothing bad will happen to the Earth in 2012. Our planet has been getting along just fine for more than4billion years, and credible scientists worldwide know of no threat associated with 2012.
Q: What is the origin of the prediction that the world will end in 2012?A: The story started with claims that Nibiru,asupposed planet discovered by the Sumerians, is headed toward Earth. This catastrophe was initially predicted for May 2003, but when nothing happened the doomsday date was moved forward to December 2012. Then these two fables were linked to the end of one of the cycles in the ancient Mayan calendar at the winter solstice in 2012 -- hence the predicted doomsday date of December 21, 2012.
Q: Does the Mayan calendar end in December 2012?A: Just as the calendar you have on your kitchen wall does not cease to exist after December 31, the Mayan calendar does not cease to exist on December 21, 2012. This date is the end of the Mayan long-count period but then -- just as your calendar begins again on January 1 -- another long-count period begins for the Mayan calendar.
Q: Couldaphenomena occur where planets align inaway that impacts Earth?A: There are no planetary alignments in the next few decades, Earth will not cross the galactic plane in 2012, and even if these alignments were to occur, their effects on the Earth would be negligible. Each December the Earth and sun align with the approximate center of the Milky Way Galaxy but that is an annual event of no consequence. "There apparently isagreat deal of interest in celestial bodies, and their locations and trajectories at the end of the calendar year 2012. Now, I for one loveagood book or movie as much as the next guy. But the stuff flying around through cyberspace, TV and the movies is not based on science. There is evenafake NASA news release out there..."- Don Yeomans, NASA senior research scientist
Q: Is thereaplanet or brown dwarf called Nibiru or Planet X or Eris that is approaching the Earth and threatening our planet with widespread destruction?A: Nibiru and other stories about wayward planets are an Internet hoax. There is no factual basis for these claims. If Nibiru or Planet X were real and headed for an encounter with the Earth in 2012, astronomers would have been tracking it for at least the past decade, and it would be visible by now to the naked eye. Obviously, it does not exist. Eris is real, but it isadwarf planet similar to Pluto that will remain in the outer solar system; the closest it can come to Earth is about4billion miles.
Q: What is the polar shift theory? Is it true that the earth’s crust doesa180-degree rotation around the core inamatter of days if not hours? A: A reversal in the rotation of Earth is impossible. There are slow movements of the continents (for example Antarctica was near the equator hundreds of millions of years ago), but that is irrelevant to claims of reversal of the rotational poles. However, many of the disaster websites pullabait-and-shift to fool people. They claimarelationship between the rotation and the magnetic polarity of Earth, which does change irregularly, withamagnetic reversal taking place every 400,000 years on average. As far as we know, suchamagnetic reversal doesn’t cause any harm to life on Earth. A magnetic reversal is very unlikely to happen in the next few millennia, anyway. Earth, as seen in the Blue Marble: Next Generation collection of images, showing the color of the planet's surface in high resolution. This image shows South America from September 2004.
Q: Is the Earth in danger of being hit byameteor in 2012?A: The Earth has always been subject to impacts by comets and asteroids, although big hits are very rare. The last big impact was 65 million years ago, and that led to the extinction of the dinosaurs. Today NASA astronomers are carrying outasurvey called the Spaceguard Survey to find any large near-Earth asteroids long before they hit. We have already determined that there are no threatening asteroids as large as the one that killed the dinosaurs. All this work is done openly with the discoveries posted every day on the NASA NEO Program Office website, so you can see for yourself that nothing is predicted to hit in 2012.Q: How do NASA scientists feel about claims of pending doomsday?A: For any claims of disaster or dramatic changes in 2012, where is the science? Where is the evidence? There is none, and for all the fictional assertions, whether they are made in books, movies, documentaries or over the Internet, we cannot change that simple fact. There is no credible evidence for any of the assertions made in support of unusual events taking place in December 2012.
Q: Is thereadanger from giant solar storms predicted for 2012?A: Solar activity hasaregular cycle, with peaks approximately every 11 years. Near these activity peaks, solar flares can cause some interruption of satellite communications, although engineers are learning how to build electronics that are protected against most solar storms. But there is no special risk associated with 2012. The next solar maximum will occur in the 2012-2014 time frame and is predicted to be an average solar cycle, no different than previous cycles throughout history.Addition information concerning 2012 is available on the Web, at:
Sky and Telescope Magazine: "2012: The Great Scare"
009 - BamaAhYae-Nyintpaung
ဒိန်းမတ်ဝန်ကြီးချူပ် Lars Løkke Rasmussen နှင့် Bornholm ရှိ နိုင်ငံရေးအင်အားစုများတွေ့ ဆုံ
ဒိန်းမတ်ဝန်ကြီးချူပ် Lars Løkke Rasmussen နှင့် မြန်မာ့နိုင်ငံရေးအင်အားစုမှ ၃ဦးသည် Bornholm မြို့ Fredensborg hotel တွင်
၁၃.၁၁.၂၀၀၉ နေ့ ၁၇ နာရီမှ ၁၈နာရီအထိပြုလုပ်သော ပြည်သူ့ များနှင့်ရင်းနှီးစွာတွေ့ ဆုံဆွေးနွေးပွဲသို့တက်ရောက်၍မြန်မာ့အ
ဆွေးနွေးပွဲတွင်မြန်မာ့ နိုင်ငံရေးအင်အားစုများမှ ဝန်ကြီးချုပ်အားမြန်မာနိုင်ငံ၏အခြေအနေ နှင့် ၂၀၁၀တွင်ပြုလုပ်မည့်စစ်အစိုးရ၏
ဒိန်းမတ်ဝန်ကြီးချူပ်မှစနစ်ကျ၍လွတ်လပ်သောတရားမျှတပြီးအများပြည်သူလက်ခံနိုင်သည့်ရွှေးကောက်ပွဲကိုသာမိမိအနေနှင့်ရော ဒိန်းမတ်ပြည်သူများအနေနှင့်ပါလိုလားကြောင်းသိသာထင်ရှားသည့်ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှူ့မရှိပဲစစ်အစိုးရကတဖက်သတ်ပြုလုပ်မည့် ၂၀၁၀
ရွှေးကောက်ပွဲကိုမိမိအနေနှင့် လက်ခံနိုင်မည်မဟုတ်ကြောင်းဒိန်းမတ်နိုင်ငံအနေနှင့် ဥရောပသမဂ္ဂ၏သဘောထားအတိုင်းမြန်မာစစ်အစိုးရ
အားပိတ်ဆို့ အရေးယူမှူများကိုဆက်လက်လုပ်ဆောင်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း, တရုတ် နှင့်ရုရှားနိုင်ငံကဲ့သို့သောနိုင်ငံများကိုလဲနည်းမျိုးစုံဖြင့်
မြန်မာနိုင်ငံ၏ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေဆိုင်ရာ ရေဒီယိုအင်တာဗျူးများ
002 - MyanmarNaingGanPhaweSePoneAhChaeKhanEuPaDaySaineYarRadioInterviewmyar-KyawThaung
ခပ်ကြမ်းကြမ်း အိုးလှုပ်ချက်ကြောင့် ဝေဖန်ခံနေရတဲ့ ဒါလီလင်း
အောက်တိုဘာလ (၁၇) ရက်က သြစတြေးလျနိုင်ငံ ပါ့သ်မြို့မှာ ပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ နာဂစ်ရန်ပုံငွေ ပဒေသာကပွဲမှာ “တောဂေါ်လီ” သီချင်းဖြင့် ခပ်ကြမ်းကြမ်း ကပြ ဖျော်ဖြေခဲ့တဲ့ မင်းသမီး ဒါလီလင်းအပေါ် ပရိသတ်ရဲ့ ဝေဖန်ပြစ်တင်သံတွေ ထွက်ပေါ်နေပါတယ်။ ရွှေတံဆိပ်ဆုရှင် မြန်မာ့ရိုးရာ အက မင်းသမီးတစ်ယောက် အနေနဲ့ အခုလို Sexy ကကွက်တွေနဲ့ မဖျော်ဖြေ သင့်ဘူးဆိုပြီး လူပြောများနေတာပါ။
BY ရဲရင့်ငယ်(ကနေဒါ) ... 11/15/20093အကြံပြုခြင်း
Voice of Burma Information Group Issue No. 736, NOVEMBER 15, 2009
သီရိလင်္ကာတွင် အာဏာသိမ်းမည့် သတင်းများကြောင့် လုံခြံ...
မြန်မာနိုင်ငံ၏ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေဆိုင်ရာ ရေဒီယိ...
ခပ်ကြမ်းကြမ်း အိုးလှုပ်ချက်ကြောင့် ဝေဖန်ခံနေရတဲ့ ဒ...
Voice of Burma Information Group Issue No. 736, NO...
ပြည်တော်ပြန် .စုမယ်ထွေး. နန်းတက်မှ အေး....
"ဆည်းဆာသစ်ပင်" ဇာတ်ကား ရိုက်ကွင်းမှ စိုင်းစိုင်းခမ်းလှိုင် နှင့် ၀တ်မှုံရွှေရည်